အသက် ၂၄ နှစ် - သန္ဓေတည်ခြင်းနှောင့်နှေးခြင်းမှကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
မင်္ဂလာပါလူတိုင်းအတွက်, ငါသည် 24 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါ့အပြဿနာကဘာလဲဆိုတာထွက်နေသေးတယ်: ပုံမှန်မဟုတ်သော porn နှင့်သေခြင်းချုပ်ကိုင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နှောင့်နှေး orgasm ။
ဇွန်လ 04, 2013,
အရာက၊ ငါရည်းစားအသစ်ရလိုက်သည်။ သူမသည် superhot ဖြစ်ပြီးသိတယ်။dကိုလိုချင်တယ်။ ငါလုံးဝသူမ၏အဘို့အကျဆင်းသွားခြင်းနှင့် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်နှစ်ပတ်အကြာ။ ငါသူမနှင့်ခြောက်ကြိမ်တိုင်တိုင်အိပ်ခဲ့ရတယ်၊ အရမ်းပျော်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအော်ဂဇင်တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူး။ 10 မိနစ်အကြာတွင်ငါကအတု။ မနေ့ကသူမကသူမငါ့ကိုထိုးချင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်, သူမမှာရည်းစားတွေအများကြီးရှိပြီးသား, ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလိမ့်မယ်လို့အတုအတုကြောင့်ငါငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအချိန်မှာသူမကငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားတစ်ခုခုရှိတယ်လို့သူမတွက်ဆခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ယခုကျွန်ုပ်ဘာလုပ်လို့ရလဲ။ ငါသူ့ကိုတကယ်မဆုံးရှုံးစေချင်ဘူး ငါပြန်လှည့်ကြည့်သောအခါငါလိင်ဆက်ဆံပြီးသားမိန်းကလေးများနှင့် ၄၅ မိနစ်ကြာလိင်ဆက်ဆံဖို့လိုအပ်သောကြောင့်ငါနှင့်ဆက်ဆံရေးပျက်ပြားသွားသည်။ တော်တော်များများ sucks ။
ငါ porn စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကလိင်တူချစ်သူများနှင့်ခံတွင်းလိင်ပါဝင်ပတ်သက်, အဖြစ်မှန်၌ငါ့အားလှုံ့ဆော်ဖို့ထက်အစားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏။
Initiative POST - New Girlfriend၊ တစ်ခုခုမှားနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာပြီ
POST ကို LINK - Delayed သုက်လွှတ်မှုမှကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
ဇူလိုင်လ 29, 2013
ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်။ ဤနေရာတွင်အချို့ရေးသားချက်များရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုတုံ့ပြန်မှုမှာ“ ရောဂါပျောက်ကင်း” သူတစ် ဦး နှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာကိုရေးသားရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောပြsufferနာများမှခံစားခဲ့ရသူအချို့ကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်။
ဒီမှာရှိတဲ့တခြားသူတွေလိုပဲ၊ ငါကိုယ်တိုင်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကညစ်ညမ်းဟာငါ့ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ ထူးဆန်းသည်မှာငါ ၁၃ နှစ်အရွယ်၌ယောက်ျားနှင့်မိန်းမစပ်ကြား“ စစ်မှန်သော” လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်သို့မည်ပုံရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမပြုမီလိင်တူချစ်သူလိင်တူချစ်သူများအားလိင်တူချစ်သူများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကို fetish လို့ခေါ်သင့်သလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးလိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလိင်တူဆက်ဆံသူတွေကိုငါအမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။
ငါဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ဦးကရှက်ကောင်လေး, ငါ့ပထမဦးဆုံးအစစ်အမှန်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးငါ 19 နှစ်အရွယ်မှာဖြစ်ခြင်းသို့ရောက် လာ. , ဒါပေမယ့်သူမတစ်ဦးကညာခဲ့နဲ့ကျွန်မကြိုးစားခဲ့အခါတိုင်းရှိသည်
လိင်သူမကတစ်နှစ်အကြာတွင်ငါတကယ်သူမ၏ချစ်ပြီးထိုသို့သူမ၏အပြစ်တင်သောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုမှကြီးကျယ်သောတက်ဖဲ့, ကသိပ်သူမ၏စိတ်ထိခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်။ ငါသည်ငါ၏ပထမဦးဆုံးအစစ်မှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်ကြာ။ သူမသည်အတော်လေးအတွေ့အကြုံနှင့်သူမကြောင့်ဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်ကဲ့သို့ငါ့ကိုနဲ့အတူလိင်ရှိသည်ဖို့စတင်ခဲ့ဒုတိယရက်စွဲအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့ကိုကအစဉ်အမြဲငါခံစားခဲ့ရအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အရာကြီး, ဒါပေမယ့်ငါ cum မှစီမံခန့်ခွဲခြင်းမရှိပေ။ ငါ၏အအာရုံကြောပေါ်မှာအပြစ်တင်ပေမယ့်ပြီးနောက်တစ်လငါလိင်စဉ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိဖို့အလွန်ခဲယဉ်းအချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အခါတိုင်းကျွန်တော်ငါကအနည်းဆုံးနာရီဝက်လိုအပ်ဆုံးနဲ့မကြာခဏငါမှာအားလုံးဖြစ်ချင် manage မလုပ်ခဲ့ပါကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားတူသောသူမတကယ်ပူခဲ့ပေမယ့်ဒါဟာအမြဲခံစားရတယ် ..
ဒီခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုဆက်ဆံရေးဟာအရိပ်အာဝါသလွှမ်းမိုးနေသောကြောင့်မည်သို့ပင်ဆိုစေသူမငါ့ကိုစွန့်ပစ်။ အပျိုကညာနှင့်အတူအခြားကြားဆက်ဆံရေးအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည့်နောက်ထပ်ကြီးကျယ်သောအတွေ့အကြုံကို။ အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးကိုတစ်လနောက်တော်သို့လိုက်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ငါနေဆဲလာမေ့သွားရောနောက်တဖန်သူမ၏အပြစ်တင်လိင်ခဲ့သည့်အခါ, တစ်ဦးအဖွဲ့ဟာမကြာမီပြီးနောက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
မေလ, ငါသည်ဤဖိုရမ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တကယ့်ကြှနျုပျမကျြစိကိုဖှငျ့၏။ ဤအမှုအလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအများအပြားလိင်ကြိုးစားမှုလိင်တူချစ်သူ porn မှပယ် yerking ၏ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအနှစ်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းပျက်ကွက်သာမိန်းကလေးငယ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေခံချုပ်ကိုင်နှင့်ထူးဆန်း fetishes အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ပို. ပို. ပြင်းထန်သောဖြစ်လာခဲ့သည်ပေးသောအလေ့အထအချို့ကိုမျိုး။
10 မိနစ်နောက်မှငါရပ်တန့်နှင့် (သင်သည်ငါ၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားလျှင်) တစ်ခု orgasmn ရှိသည်ဖို့ဟန်ဆောင်
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးသုံးပတ်ကြာသည့်အခါ၎င်းသည်နောက်ဆုံးတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်သည်လျောက်ပတ်သောအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းသန္ဓေတည်နိုင်ခဲ့ပြီးပထမဆုံးအနေဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။
ထိုအချိန်မှစ. အများကြီးဘာမျှပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည်ကြောင်းတည်းသောပြဿနာလိင်နှင့်အရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါအရက်မူးဖြစ်ကြောင်းကိုအခါ, ငါနေဆဲနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမှခံရ၏။ ဒါဟာရက်နာနှင့်အတူအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ..
အကြှနျုပျ၏ရည်းစားငါ၏အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်သည်နှင့်ကြောင့်ငါပြည့်စုံဆက်ဆံရေး၏ခံစားချက်ရှိပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် .. အခု 24 ဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်တကယ့် .. မြန်နှုန်းမြင့်ညစ်ညမ်းမှကျေးဇူးတင်စကားအချို့အချိန်ကိုယူ။
စစ်မှန်သောလိင်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆက်ဆံမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်လာသည် (လိင်တူဆက်ဆံခြင်းпорноလိင်တူချစ်သူ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရသင့်သော“ စစ်မှန်သောလိင်” နှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ)
ငါဒီဖိုရမ်ရဲ့ typicial အသုံးပြုသူငါမသိပါတယ်, ကျွန်မအနေနဲ့စိုက်ထူရတဲ့နှင့်အတူရုန်းကန်မှုများမရှိခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူညီတဲ့ပြဿနာနှင့်အတူအချို့သောယောက်ျားတွေရှိပါတယ်။
ကွာ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတဲ့အစစ်အမှန်ရည်းစားရကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်အတူလူနာ BE ။ သင်ဆဲလိင်ဆက်ဆံမှာကျရှုံးလျှင် dont စိတ်မပူပါနဲ့ .. လိင်ကာလအတွင်းအပန်းဖြေဖို့ကြိုးစားပါ !! ဘာမျှမပြောထက်ပေါ်မယ့်အရာကိုသင့်ရဲ့ရည်းစားပြောပြရန် သာ. ကောင်း၏, သူသည်သင်၏ဆက်ဆံရေးသည်အမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့အရာသည်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်၏ဦးခေါင်းတက်သိမ်းဆည်းထားပါ, သင်ကိုက်ညီသောမိန်းကလေးများအတွက်အချိန်နှင့်နေရာအရပ်အမြဲရှိပါတယ် !!